Khabar Kantipur » गुल्मीको एउटा विद्यालयमा यस्तोसम्म गरिन्छ सुन्दा अचम्म लाग्छ हेर्नुहोस !
अनिल खत्री, गुल्मी : गुल्मीमा उउटा बिद्यालयमा रोलनम्बर १३ सुन्दा पनि मानिस झसकिन्छन् । सुन्दा अचम्म लाग्न पनि सक्छ । तर जिल्लाको एउटा विद्यालयमा झण्डै ५ दशकदेखि एउटा रोल नम्बर १३ नराखि बिद्यार्थीको हाजिरी गरिर्दै आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा रोल नम्बर १३ नलेखेको अहिले ४४ वर्ष वढि पुगेको छ ।
विद्यालयको कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले रोल नम्बर १३ सुनेका छैनन् । विद्यार्थीहरू मात्र होइन, शिक्षकहरू पनि रोल नम्बर १३ बाट निकै टाढा छन् ।
२०३२ सालदेखि उक्त बिद्यालयमा रोल नम्बर १३ नलेखिदै आएको हो।कक्षा ९ को रोल नं १३ सधैं खाली हुन्छसो कक्षामा रोल नम्बर १२ पछि एकैपटक १४ आउँछ ।बिद्यार्थी लगातार मृत्यु भएको भन्दै विद्यालयले कक्षा ९ मा रोल नम्बर १३ लेखिएको छैन। विद्या लयमा भर्ना भई कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने १३ रोल नम्बर भएका बालबालिकाको विभिन्न समयमा मृत्यु भएका कारणले विद्यालयले नै रोल नम्बर १३ लेख्न छोडेको हो । विद्यालयका सहायकप्राचार्य युवराज ज्ञवालीका अनुसार रोल नम्बर १३ भएका विद्यार्थीको निधन भएका कारणले रोल नम्बर १३ लेख्न छोडिएको बताए।
उनका अनुसार विद्यालयको कक्षा ९ मा १३ रोल नम्बर भएका तत्कालिन अर्खले गाबिस ७ भण्डारी टोलका ढुण्डीराज भण्डारीको २०२५ सालमा परिक्षा दिने क्रममा पेट दुखेर मृत्यु भएको थियो ।त्यस्तै दोस्रो पटक २०३० सालमा तत्कालिन तम्घास गाबिस ४ का जुनप्रसाद श्रेष्ठको २०३१ सालमा तत्कालिन तम्घास गाबिस १ रमेश श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो ।
२०३२ तम्घास पुरानोबजारका कृष्णप्रसाद पाण्डेयको विद्यालयमै परेको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको थियो । बिद्यालयमा लगातार बिद्यार्थीहरुको मृत्यु भएका कारण बिद्यार्थी अबिभावकहरुले कक्षा ९ मा १३ अशुभ भएको भनेका कारण सबैको सल्लाह अनुसार लेख्न छोडिएको बिद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक ज्ञवालीले बताए ।
पहिले पहिले १३ रोल नम्बर लेख्ने गरेता पनि हाल भने लेख्न छोडिएको ज्ञवालीले बताए । सबैको मनमा अशुभ भन्ने रहेका कारण कसैले पनि १३ रोलनम्बर लेख्न सुन्न नि चाहदैनन् । अप्रिय घटना घटेका कारण अहिल पनि घटना हुन्छ की भन्ने डरले १३ रोल्नम्बर नलेखिएको बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य घनश्यमा पाण्डेयले बताए।
लगातार ४ जना बिद्यार्थीको १३ रोल नम्बर भएका मृत्यु भएको र बिद्यार्थीहरुले पनि १३ रोल नम्बर राख्न नचाहेका कारण बिगत देखि यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको पाण्डेयले बताए।कक्षा ९ को रोल नं १३ सधैं खाली हुन्छसो कक्षामा रोल नम्बर १२ पछि एकैपटक १४ आउँछ ।
२००९ सालमा स्थापना भएको बिद्यालय हाल उक्त बिद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढनपाठन हुँदै आएको छ ।बिज्ञान, शिक्षा बिज्ञान, मानबिकी, व्यवस्थापन १२ सय वढि बिद्यार्थीहरु पठन पाठन गर्दै आएको बिद्यालयले जनाएको छ । जिल्लाकै सामुदायिक बिद्यालयमा उत्कृष्ट बिद्यालयमा परिचित छ । बिद्यालय नमुना बिद्यालयको रुपमा छनोट समेत भएको छ । बिद्यालयमा पढ्न जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरुमा समेत बिद्यार्थीहरु आउने गर्दछन् ।]]
यो पनि पढ्नुहोस :- लामखुट्टेले सतायो..,अपनाऊनुहोस् लामखुट्टे हटाउने यस्तो घरेलु तरिका !
लामखुट्टे भगाउने क्रिमहरु प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसलाई छाडिदिनुहोस् । अब तपाईं आफैं घरेलु प्रविधिबाट लामखुट्टे भगाउने स्प्रे बनाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि तुलसी, पानी र भोड्का जस्ता घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीहरु चाहिन्छन् ।
पहिला तुलसी र पानी उमाल्नुहोस् र तुलसीलाई राम्रोसँग निचोरेर आएको पानीलाई एउटा सफा बोतलमा राख्नुहोस् । बोत्तलमा जति पानी छ, त्यसको आधा भोड्का थप्नुहोस् । बिस्तारै हल्लाउनुहोस् । तपाईंको घरमै अब लामखुट्टे धपाउने स्प्रे तयार भयो ।